Mogadishu Journal » 2018 » September » 5
Madaxda Itoobiya iyo Eritrea oo si wadajir ah ugu soo dhoweeyay Asmara Madaxweyne Farmaajo
Mjournal :-Madaxda dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa caawa si wadajir ah ugu soo dhoweeyay Madaxweynaha Soomaaliya caasimada dalka Eritrea ee Asmara. Madaxweynaha Eritrea Asaias Afwerki iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku wada sugnaa garoonka diyaaradaha magaalada...
Markabkii ugu horeeyay ee ay leedahay dowlada Itoobiya oo ku xirtey dekeda Musawac ee dalka Eritrea
Mjournal :-Markabkii ugu horreeyey ee laga leeyahay Itoobiya ayaa ku xirtay dekadda Musawac ee dalka Eritrea kadib 20 sano. Markabkan oo ka soo shiraacday Boqortooyada Sacudi Carabiya ayaa qeyb ka ah heshiis ay dhowaan gaareen dowlada Itoobiya iyo dowlada Eritrea waxaana lagu...
Axmed Madoobe:”Sababta loo fulin la’yahay xukunada dilka ah waa Madaxda dalka oo haysta dhalasho dalal kale”
Mjournal :-Madaxweynaha Maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa ku macneeyay sababaha loogu fulin la’ yahay xukunada dilka ah dadka ay xukumaan maxkamadaha ciidamada inay tahay madaxda dalka oo haysta dhalasho dalal shisheeye. Axmed Madoobe Madaxweynaha...
Madaxweyne Farmaajo oo mar labaad tagaya Eritrea
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan lagu waddaa in uu booqdo Mar kale Magaalada Asmara ee Caasimadda dalka Eritrea. Qaar ka mid ah Warbaahinta Eritrea ayaa sheegty in Madaxweyne Farmaajo uu doonaayo in uu dhex dhexaadiyo dalalka Jabuuti...
“Salah wuxuu u qalmaa inuu ku guulesyto abaal marinta FIFA
Madaxweynaha (CAF) Ahmad Ahmad ayaa rajo weyn ka muujiyey inuu Mohamed Salah uu ku guuleysanayo abaal marinta FIFA The Best. Ahmed wuxuu inta ku daray Salah haddii ay guusha raacdo “Guushaasi ma aha mid u soo hoyatay dalka Masar oo keli balse waxay sheraf weyn u tahay ayuu...
Sabab shaqsi ah oo Diego Costa looga saaray xulka Spain
Diego Costa ayaa laga saaray xulka Spain ee ciyaaraha Uefa Nations League kaga hor imaanaya England iyo Croatia sababo shakhsi ah, sidaasi waxaa lagu yiri warbixin kasoo baxday xiriirka kubada cagta Spain. 29 jirkaan weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ayaa lagu badalay...
Mjournal :-Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa ka hadlay doorasho dhawaan la filayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Doorashada ka dhaceyso magaalada Baydhabo ayaa waxay tahay labo kursi oo ka banaan golaha shacabka, waxaana Xaliimo Yareey oo ah...
Shirka magalada Kismaayo oo maalintii labaad galay
Mjournal :-Magaalada Kismaayo waxaa ka socda shir maalinkii labaad galay, kaasi oo u dhaxeeya Madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira, oo isugu tagay halkaasi, kadib markii uu casuumay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe). Madaxweynayaasha maamulada...